Maoritania: Diabe Ho Fahatsiarovana Ilay Mpanohitra Ny Fanavakavaham-Bolokoditra Nodimandry · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2012 9:37 GMT
Miantso ny hanaovana diabe amin'ny 27 Septambra 2012 ao an-drenivohitra Nouakchott ho fahatsiarovana ilay mpikatroka manohitra ny fanavakavaham-bolokoditra Lamine Mangane ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona Touche pas à ma nationalité TPMN (malagasy: Aza kitikitihinao ny zom-pireneko). Novonoin'ny manampahefan'ny tanànan'i Maghama nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny fanisam-bahoaka nanilikilika ny olom-pirenena Maoritaniana mainty hoditra i Mangane.
Ho Fahatsiarovana an'i Lamine Mangane
Iza moa i Lamine Mangane ? Mampitamberina ny tsiarony ny zanany lahy ao amin'ny bilaogy Mauritanides [fr] ny rainy Moussa Abdoul Mangane:
Maty voan'ny bala nandritra ny fihetsiketseham-panoherana ny fanisam-bahoaka tao Maghama i Lamine tamin'ny faha-19 taonany. Nametraka fitoriana tany amin'ny Tribonalin'i Kaedi izahay mba ivoahan'ny rariny. Indrisy anefa fa mbola tsy nahazo valiny izahay mandraka ankehitriny. Mandehandeha tsy manana ahiahy, noho ny firaisana tsikombakomban'ny rafi-pitsarana, ny namono ny zanako. Ny hany sazy azony dia ny famindrana toerana azy amin'ny asany [..] Amin'ny alalan'ny fahafatesan'ny zanako lahy sy ireo naratra tany Maghama, taorian'ny fihetsiketseham-panoherana ilay fanisàna manavakava-bolokoditra, mbola ny fiaraha-monina Maoritaniana Mainty ihany no voaviravira sy maratra anaovana herisetra
Lahatsary avy amin'i Siteflere ahitana ny manodidina sy mombamomba an'i Lamine Mangane sady mampiseho ireo olona nanao diabe taorian'ny nandrenesana ny fahafatesany:
Nanao izao fanambarana manaraka izao tao amin'ny bilaogy Info de la Rue [fr] ny fikambanana Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste en Mauritanie IRA- Mauritanie (malagasy: Fandraisana an-tanana ho famongarana indray ny hetsika manafoana ny fanandevozana any Maoritania) :
Tsy tokony hijanona tsy misy fanasaziana ny fahafatesan'i Lamine Mangane. Raha mieritreritra ny fahefana fa asam-pandresen-dahatra tsy hihetsehana iny famonoan'olona iny dia diso hevitra tanteraka izy, mifanohitra amin'izany no hitranga ary hiteraka korontana tanteraka.
Tsy i Lamine Mangane irery no lasibatra amin'ny fitarazohan'ny fifandrafiana ara-bolonkoditra misy eo amin'ny arabo sy ny mainty any Maoritania. Nanambara ny Hetsika Ho amin'ny Rariny sy ny Fitoviana any Maoritania (M.J.E.M) fa nanjavona hatramin'ny 22 febroary lasa teo i Bakary Bathily, 25 taona, mpandala ny zon'olombelona ary mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Nouakchott miompana amin'ny lalàna sy ny toekarena:
The authorities initiated a massive manhunt to arrest the young activist and prevent him from advancing the cause of the oppressed Black Africans in Mauritania. In Nouakchott alone, dozens of black students have been arrested this year. Others have been harassed and tortured by the Police [..] Bakary’s family has not seen him or spoken with him since February 2, 2012. Numerous Human Rights organizations in Mauritania have been demanding the government to call off the manhunt…
Nanao hazalambo faobe ny manampahefana hisamborana ilay tanora mpikatroka sy manao izay tsy hahavitany ny fiarovana ny zon'ny Afrikana mainty ao Maoritania. Ao Nouakchott fotsiny, mpianatra mainty ampolony no nosamborina tamin'ity taona ity. Ny hafa nogidragidrana sy nampijalian'ny polisy [..] Tsy hitan'ny fianakaviany hatramin'ny 2 Febroary 2012 i Bakary. Fikambanana mpiaro ny zon'olombelona ao Maoritania maro no nitaky tamin'ny governemanta hampitsahatra ny hazalambo…
Ny bilaogy Flere mampahatsiahy antsika ny tantara lavan'ny ady teo amin'ny arabo sy ny mainty tao Maoritania. [fr]:
Fisamborana miaramila maro tamin'ny Oktobra 1987 taorian'ny nilazana fa nisy fanonganam-panjakana: 3 novonoina, 23 voaheloka tnelanelan'ny 5 taona ka hatramin'ny mandrapahafaty. Miaramila an'arivony no noroahina tao amin'ny tafika rehefa nanaovana fampijaliana sy fanalam-baraka isan-karazany. Fampijaliana sy fikarakarana ratsy izay niteraka fahafatesana gadra politika 4 tany Waalata. Tamin'ny Aprily 1989, 700 raha kely indrindra ny mainty novonoin tao Nouakchott, Nouadhibou sy ny tanàna hafa, izay nisy firaisana tsikombakomba hatrany amin'ny fahefana faratampony any.
Abdoulaye Yero DIA nandresy lahatra fa tsy azo leferina intsony ny toe-draharaha [fr]:
Misy zavatra efa mazava sy voamarin'ny tantara: mifintina dia mifintina ny faharetan'ny famoretana eo amin'ny tantara. Tsy maintsy atsahatra ny tsy rariny. Aoka ho fantatry ny mpitondra fa raha mbola manao zavatra tahaka izao hatrany ry zareo dia mamelona fankahalana eo amin'ny zanany ihany ary mampandresy lahatra eo amin'ny voageja ankehitriny hanana fanirian-kamaly faty.
Abdoul Birane Wane milaza ny antsipirihan'ny hetsika omanina mialoha ny diabe [fr] :
- Alarobia 26 Septambra, rindrankira lehibe eo amin'ny boriborintany fahadimy manomboka amin'ny enina hariva.
– Alakamisy 27 Septambra amin'ny 11 ora atoandro, sit-in manoloana ny minisiteran'ny fitsarana hitakiana ny fitsarana ireo voampanga.
– Amin'ny dimy hariva, fihaonambe eo amin'ny boriborintany fahaenina.